Voadika ny 21 Aogositra 2017 8:04 GMT
(Marihina fa tamin'ny marsa 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny anglisy)
Nodimandry tao amin'ny fonjan'i Evin ao Tehran tamin'ny 18 marsa i Omid Reza Mir Sayafi, mpanao gazety sady bilaogera iraniana 29 taona. Voaheloka higadra roa taona sy tapany izy tamin'ny desambra, noho ny filazana fa nanivaiva mpitondra fivavahana sy fanaovana propagandy hamelezana ny Repoblika Islamikan'i Iran. Mbola teo am-piandrasana fitsarana noho ny filazana ho nanompa ny Islam ihany koa i Mir Sayafi.
Araka ny nolazain'ny tranonkalan'ny Mpikatroky ny zon'Olombelona ao Iran, tratran'ny fahakiviana lalina tao am-ponja i Omid Reza ary nomena fanafody izay heverina ho be loatra ny noraisiny. Nilaza ny Dr. Hesam Firouzi, dokotera voafonja sady mpikatroky ny zon'olombelona fa efa nandrisika ny manampahefanan'ny fonja izy handefa an'i Omid Reza any amin'ny hopitaly ivelan'ny fonja saingy tsy nanaiky izany ireo dokoteran'ny fonja sady tsy nanao ny fitsapana fototra akory aza.
Nisy ny fanentanana natao tao amin'ny Facebook “Hitazona an'i Iran ho tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'ny bilaogera Mirsayafi tany am-ponja”.
Nilaza ny bilaogera Mojtaba Saminejad fa nifampireaka taminy i Omid Reza roa andro alohan'ny fatesany fa mety ho avela hivoaka ny fonja ihany izy ato ho ato hankanesana any amin'ny hopitaly. Nilaza ilay bilaogera fa mba efa nanantena vaovao tsara noho izao nitranga izao ihany izy.
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Mpikatroky ny zon'Olombelona ao Iran andro vitsy talohan'ny nandehanany tany am-ponja, dia niteny i Omid Reza fa miresaka kolontsaina ny bilaoginy fa tsy natao hanompana.